Kalluumeysato ku dhimatay Roob Dabayla wata oo ka da’ay
Who’s Wouter Basson, “Doctor La Mort”?
HRW welcomes the arrest of the previous Seleka chief
defense force rite in honor of the primary
Aqila Saleh becomes president unlikely, Libyan
Guddoomiyaha Midowga Afrika: Muxuu ka yiri khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya?…
Wasiir Bayle: Waxaan ka hadlay oo kaliya Qaadka Herer! Hadalkayga “si khaldan…
the informant, Modeste Bahati Lukwebo, meets
By Newsroom	 On Nov 23, 2020
Inta la xaqiijiyay 5-ruux oo kalluumeysato ah ayaa ku dhimatay Roob Dabayla wata oo ka da’ay Deegaanno Xeebeedyada Puntland saacadihii lasoo dhaafay sida ay Warbaahinta u sheegeen mas’uuliyiin katirsan maamulkaas.
Digniin xooggan ayaa loo diray Kaluumeysata & Dadka kunool Magaalo Xeebeedyada Puntland si ay uga feejignaadaan Dabaylaha & Roobka isla socda ee la saadaaliyay, si aysan dhibaato uga gaarin.
Guddoomiyaha Midowga Afrika: Muxuu ka yiri khilaafka u dhexeeya…
Dadka dhintay & kuwa dhaawacmay waxaa la rogmaday Doomo ay saarnaayeen si ay usoo jilaabtaan (Kalluumeystaan) sida ay xaqiijiyeen Kalluumeysato kale oo aqoon u lahaa shaqsiyaadka dhintay.
Maydadka 3-ruux oo Yemeniyiin ah oo Kalluumeysata ah ayaa laga helay Xeebaha Gobolka Bari sida ay xaqiijiyeen qaar kamid ah mas’uuliyiin katirsan DG Puntland oo ku howlan raadinta khasaaraha ka dhashay Roobka Dabayalaha wata.
“Degmada Xaafuun waxaa ka da’ay Roob Dabayla wata oo aan ka dignay maalmihii lasoo dhaafay, xaaladdu ma wanaagsano, maadaama isgaarsiintu aan la heli Karin, balse baadi-goob ayaa socda si gurmad loo gaarsiiyo dadka halkaas ku sugan ay u nugul yihiin Roobabka laga digay” Sidaasi waxaa yiri Guddoomiyaha Karkaar.
Deegaannada u dhaw Xaafuun wararka helaya waxa ay sheegeen in ay barakac sameeyeen qoysaska halkaas kunool oo u badan Kalluumeysato si aysan Khatar u gelin naftooda, maadaama ay la deristay cabsi xooggan oo ka dhalatay digniinta & dadka waxyeelada gaartay.
RW Rooble oo Wasiirada DG Koofur Galbeed & Odoyaasha ka
Waa maxay Sababta Abiy Ahmed waqti dheeraad uu u siiyay